​माघे सङ्क्रान्तिका लागि चाकु बनाउन भ्याइनभ्याई
भक्तपुर । माघे सङ्क्रान्ति नजिकिँदै गर्दा मध्यपुरथिमि नगरपालिका– १२ दुईपोखरी ‘इनाय’ टोलका उत्तमराज श्रेष्ठलाई चाकु बनाउन भ्याइनभ्याई भएको छ । मध्यपुरथिमिमा ५० वर्षअघि बाबु गणेशप्रसाद श्रेष्ठले सुरु गरेको चाँकु बनाउने पेसा..
नाकाबन्दीले पर्सा–बाराका चामल उद्योगलाई मात्रै साढे ७ अर्ब रुपैयाँ घाटा
विरगञ्ज । चार महिनादेखि जारी बन्द हडताल अघोषित नाकाबन्दीका कारण पर्सा–बाराका चामल उद्योगले साढे ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको घाटा बेहोरेका छन् । दुवै जिल्लामा रहेका साना ठूला गरी २ सय ५०..
​अन्डा दिवसमा बिरामीलाई अन्डा वितरण
चितवन । तेस्रो राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवसका अवसरमा नेपाल अन्डा उत्पादक सङ्घले आज भरतपुर अस्पतालका बिरामी, कुरुवा र सर्वसाधारणलाई अन्डा वितरण गरेको छ । अस्पताल परिसरमा अन्डाको महत्वको विषयमा आयोजित कार्यक्रममा..
​उपभोक्तालाई प्रत्येक महिना रेगुलेटर र चुल्होको परीक्षण गर्न अनुरोध
काठमाडौँ । असावधानीपूर्वक ग्यासको प्रयोग गर्दा विभिन्न किसिमका दुर्घटना बढेकाले यसको प्रयोगमा सावधानी अपनाउन दुईदिने जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । ग्यास विक्रेता महासङ्घले आज यहाँ गरेको कार्यक्रममा सभासद् राजेन्द्र केसीले..
​सुन तोलामा तीनसय रुपैयाँले सस्तियो, तोलाको ४८ हजार
काठमाडौं । सन् २०१५ को अन्तिम दिन बिहीबार सुनको मूल्य तोलामा तीनसय रुपैयाँले सस्तिएको छ । छापावाल सुन आज प्रतितोला ४८ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ..
​पेट्रोल आयात दोब्बर हुँदा जनताले कहिले पाउलान् ?
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले भारतबाट हुने पेट्रोल आयातलाई दोब्बर बनाएको छ । अघिल्लो साता दैनिक ३ लाख ५० हजार लिटर पेट्रोल आयात भइरहेकोमा निगमले मंगलबारदेखि ६ लाख लिटर आयात..
​विराटनगरको रानी भन्सार नाकाबाट पेट्रोल, डिजेलको आयात बढ्यो
मोरङ । पूर्वाञ्चलको विराटनगरको रानी भन्सार नाकाबाट अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्षको मङ्सिर महिनामा इन्धन आयात अवस्था वृद्धी भएको छ । नेपाल आयल निगम क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका अनुसार पेट्रोल अघिल्लो वर्षको..
के नाकाबन्दी खुलेकै हो? आज विभिन्न नाकाबाट १९२ ट्यांकर इन्धन भित्रियो
काठमाडौं । देशका विभिन्न नाकाबाट आज दिनभरीमा १९२ ट्यांकर इन्धन भित्रिएको छ । यसरी भित्रिएको इन्धनमा डिजेलको परिमाण बढी रहेको छ । कांकडभिट्टा–पानीट्याङ्की नाकाबाट आज दिनभरमा १३ ट्यांकर डिजेल, ३ ट्यांकर..
​अर्थमन्त्रीले अवलोकन गरे ‘सुट बुट’ मेला
काठमाडौं । राजधानीको भृकुटीमण्डपस्थीत प्रदर्शनीहलमा भईरहेको सुट बुट मेला मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अवलोकन गरेका छन् । असहज परिस्थितिमा छाला जुत्ता तथा नेपाली शुटको प्रदर्शनीलाई उत्साहपूर्वक सञ्चालन गरेकोमा अर्थमन्त्री पौडेलले आयोजक..
माछा महोत्सवमा अठार प्रकारका माछाका परिकार
धादिङ । मलेखुस्थित रिचोकटारमा पुस ९ गतेदेखि सञ्चालित माछा महोत्सवमा १८ प्रकारका माछाका स्वाद चाख्न पाइने आयोजकले दाबी गरेको छ । माछाको पर्याय बनेको मलेखुमा नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य सङ्घ, जिल्ला कार्यसमितिको..
​बिराटनगर नाकाबाट ७४ ट्यांकर इन्धन नेपाल भित्रियो
काठमाडौं । शनिबार तनावग्रस्त भएको बिराटनगर नाकाबाट सोमबार अपरान्हसम्म ७४ ट्यांकर इन्धन नेपाल आएको छ । रानी भन्सार नाकाबाट सोमबार बेलुकी ५ बजेसम्म ६६ ट्यांकर डिजेल र ८ ट्यांकर पेट्रोलका..
​मिसावट पाइएपछि सल्लाघारीस्थित सूर्यविनायक आयल स्टोरमा सिलबन्दी
भक्तपुर । सल्लाघारीस्थित सूर्यविनायक आयल स्टोरमा आज वाणिज्य विभागले सिलबन्दी गरेको छ । पम्पबाट वितरण गरेको डिजेलले गाडी नचलेपछि डिजेलमा मिसावट भएको आशङ्कामा वाणिज्य विभागका निर्देशक हरिनारायण बेल्वासेसहितको टोलीले स्टोरको अनुगमन..
​प्युठानबाट मात्रै डेढ करोडको जडीबुटी निकासी
प्यूठान । जिल्लामा गतवर्ष रु एक करोड ६६ लाख बराबरको जडीबुटील जिल्लाबाहिर निकासी भएको छ । रिट्ठा, दालचिनीको बोक्रा तथा पात, टिमुर र अल्लो जिल्लाबाहिर निकासी भएको हो । जिल्ला वन..
​भारतीय रुपैयाँको अभावमा नेपाली ग्राहकहरु लुटिँदै
गौशाला । नेपालमा बन्द हडतालका कारण भारतीय रुपैयाँको अभावमा अहिले हजाराँै नेपाली ग्राहक भारतीय बजारमा ठगिन र लुटिन बाध्य भएका छन् । महोत्तरीका सीमासँग जोडिएको भारतीय बजारहरु भिट्ठामोड, सुरसण्ड, सीतामढी, मधवापुरलगायतका..
​चमेलिया जलविद्युत् आयोजना तत्काल सम्पन्न गर्न निर्देशन
रमेश लम्साल काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको सार्वजनिक लेखा समितिले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको काम तत्काल अगाडि बढाउन र कुनै पनि वहानामा काम नरोक्न ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ..
​परम्परागत रुपमा प्रयोग हुँदै आएका ढिँकीजातो, प्रविधिको विस्तारसँगै लोप हुँदै
पाल्पा । परम्परागत रुपमा प्रयोग हुँदै आएको प्रविधि विस्तारै लोप हुन थालेको छ । दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने प्रविधि आधुनिकतासँगै परम्परागत औँजारको लोप थालेको हो । मकै, कोदो, फापर आदि पिस्ने..
​भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि नेपाल सरकारलाई ८० अर्बको राजस्व घाटा
रमेश लम्साल/हरि लामिछाने काठमाडौं । भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि मुलुकले भन्सार तथा आन्तरिक राजस्वबाट झण्डै रु ८० अर्ब बराबरको घाटा बेहोर्नु परेको छ । तराई मधेसको आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण सङ्कट गहिरिँदै जाँदा..
​सरकारले वीरगन्ज नाकाबाट तीन महिनामा रु २१ अर्ब भन्सार राजस्व गुमायो
काठमाडौँ । तराई–मधेसमा जारी आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण कुल भन्सार राजस्वमा ५५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको वीरगन्ज भन्सार नाकाबाट राज्यलाई रु २१ अर्बभन्दा बढी घाटा लागेको छ । चालु आव..
​भारतीय नाकाबन्दीले कोइला अभावले इँट्टा उद्योग ठप्प
लुम्बिनी । इँट्टा उत्पादनका लागि आवश्यक कोइला ९इन्धन०को अभावमा रुपन्देहीका इँट्टा उद्योगको उत्पादन ठप्प भएको छ । चार महिनादेखिको मधेस आन्दोलन र त्यसलगत्तै भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण कोइला भित्र्न नपाउँदा व्यवसायीले..
​साढे सात अर्ब रुपैयाको लगानीमा ४८.८ मेगावाट क्षमताको खिम्ती-२ आयोजना निर्माण हुने
जिरी । सात अर्ब ५० करोड रुपैया लगानीमा पिपल्स हाइड्रो सहकारी संस्था लिमिटेड नयाँबानेश्वर काठमाडौँले खिम्ती दुई जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । दोलखाको पर्यटकीय नगरी जिरीमा आयोजित एक कार्यक्रममा..
​३९ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी–एक निर्माण आयोजना हुने
चौतारा । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी करिडोरमा ३९ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी–१ जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ । पैतालिस मेगावाटको भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट निस्केको पानीलाई सदुपयोग गरी निर्माण गरिन लागेको सो आयोजनाबाट प्रभावित फुिल्पङ्कट्टी..
​प्राधिकरणद्धारा पूनः विद्युत कटौति, आजबाट दैनिक ११ घण्टा लोडसेडिङ हुने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि दैनिक ११ घण्टाका दरले सातामा ७७ घण्टा लोडसेडिङ हुने नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ तालिका अनुसार आइतबारदेखि बिहीबारसम्म ७ घण्टा र ४ घण्टाका दरले..
​प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या : जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण
काठमाडौं । सरकारले विद्युत्भार कटौतीलाई एक वर्षभित्र अनुभव गर्ने गरी अन्त्य गर्ने बताइरहेको बेला नेपाल विद्युत् प्रसारणको राजमार्ग मानिएको प्रसारण लाइन निर्माणको अवस्था भने सङ्कटग्रस्त रहेको छ । सरकार, प्राधिकरण र..
नेपाललाई थप ईन्धन दिन चीन तयार, पारवाहन सन्धिलाई निष्कर्षमा पु¥याइने
काठमाडौं । चीनका उपराष्ट्रपति ली युआन्चाओसँग उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले विहिबार अपराह्न चीनको ग्रेट हल अफ द पिपलमा शिष्टाचार भेट गरेका हुन् । सो अवसरमा उपराष्ट्रपति लीले दुई मुलुकबीच दौत्य सम्बन्धको..
​नाका सहज बन्दै गर्दा १५८ बुलेत ग्यास भित्रियो, उपभोक्तालाई सास्थी उस्तै (कुन ग्यास कति)
काठमाडौं । भारतबाट ग्यास आयात सहज बन्दै गएको छ । भैरहवा नाकामा रोकिएका ग्यास बुलेट नेपाल प्रवेश गर्न थालेका छन् । त्यस्तै, भारतीय आयल कर्पाेरसेन (आइओसी)का रिफाइनरीले ग्यास लिन गएका..
​प्रक्रियागत झन्झट र इन्धनको अभाव : जलविद्युत् आयोजना समस्यामा
काठमाडौं । सरकारले एक वर्षभित्र जनताले अनुभव गर्ने गरी विद्युत्भार कटौतीलाई अन्त्य गर्ने घोषणा गरिरहेको बेला ऊर्जा क्षेत्रमा लागेकाले भने प्रक्रियागत झन्झट नहटाएसम्म उल्लेख्य सुधार आउन नसक्ने बताएका छन् । भारतको..
​नाकाबन्दीले इन्धनको चरम अभाव भएपछि ग्याँस, मट्टितेल, दाउरामा कालाबजारी
काठमाडौँ । इन्धन अभावपछि काठमाडौँको उत्तरपूर्वी भागमा प्रहरी र स्थानीय केही व्यक्तिको मिलेमतोमा कालाबजारी फस्टाएको छ । ग्याँस, मट्टितेल र दाउरामा समेत कालाबजारी हुँदा स्थानीयलाई मर्का परेको छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको..
​भारतीय नाकाबाट इन्धन आउने क्रम बढेयो, दिनभरमा १०३ ट्यांकर इन्धन भित्रियो
काठमाडौं । बुधबार दिनभरमा भारतबाट १०३ ट्यांकर इन्धनसहित करिब ४५० वटा मालवाहक गाडी नेपाल भित्रिएका छन् ।डिजेल ४४ ट्यांकर, ग्यास ४१ बुलेट, पेट्रोल १३ ट्यांकर र मट्टितेल ५ ट्यांकरसहित अन्य..
आन्दोलन र नाकाबन्दीले नेपाली विज्ञापन बजारमा ८० प्रतिशत गिरावट
काठमाडौं । गत वैशाखको भूकम्पपछि असारमै लय समातेको विज्ञापन बजारमा भदौ अन्तिम सातादेखि आन्दोलन र त्यसपछिको नाकाबन्दीको प्रभाव हुँदा २० प्रतिशत मात्र बजार रहेको नेपाल विज्ञापन संघ (आन)ले जनाएको छ..
नाका सहज बन्दै गर्दा कुन नाकाबाट कति भित्रियो ?
काठमाडौं । मंगलबार दिनभरमा विभिन्न नाका हुँदै पेट्रोलियम पदार्थसहित खाद्यान्न लगायतका करिब ४ सय ४० वटा गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । मंगलबार ४९ ट्यांकर डिजेल, १२ ट्यांकर पेट्रोल, १० बुलेट..
Results 889: You are at page 19 of 30